Deg Deg: Nuxurka Kulan Dhex Maray Muuse Biixi Iyo Ex Wasiir Xaglo Toosiye + Ujeedada Kulanka - Wargane News
Home Somali News Deg Deg: Nuxurka Kulan Dhex Maray Muuse Biixi Iyo Ex Wasiir Xaglo...
Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi ayaa qasriga Madaxtooyadda kulan kula yeeshay wasiirkii hore ee wasaaradda caafimaadka Dr. Saleebaan Ciise Axmed Xaglo-toosiye sidda ay shabakadda wararka ee Barigaafrikanews.com u xaqiijiyeen mas’uuliyiin ka tirsan madaxtooyadda Somaliland.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Dr. Saleebaan Ciise Axmed Xaglo-toosiye ayaa waxa muddooyinkii u dambeeyay waxa soo kala dhex-galay khilaaf xooggan oo sababay in uu warbaahinta dhawr jeer ka weeraray Ex. Wasiirka Xogla-toosiye Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Wariyeyaal ka tirsan xafiiska warbaahinta ee Madaxtooyadda ayaa saaka faafiyay sawirro muujinaya wasiirkii hore ee wasaaradda Caafimaadka oo ku sugan gudaha xarunta Madaxtooyadda Somaliland.
Dr. Saleebaan Ciise Axmed Xaglo-toosiye oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu miisaanka culus gobolka Sool ayaa waxa uu Madaxweyne Muuse kala hadlay culusyo kaga yimid deegaanka uu ka soo jeedo Xaglo-toosiye.
Saleebaan Ciise Axmed Xaglo-toosiye ayaa la sheegay in iibiyay laba guri oo uu ku lahaa Magaalada Hargeysa gaar ahaan Xaafada Masalaha ee Koonfurta Hargeysa, iyadoo uu labadaasi Guri mid ka mid ah ka iibiyey Ganacsade Afdiinle oo ka mid ah tujaarka Qaadka ka ganacsata ee Somaliland, arrintan ayaa shaki badan abuurtay.
Dad badan oo fallanqeeya arrimaha siyaasada ayaa waxa ay aamisan yihiin in Mas’uuliyiinta uu Madaxweyne Muuse Biixi magacaabay ee ka soo jeeda gobolka Sool ayaa ka saamayn badnaayeen mas’uuliyiintii xukuumadii Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo).